Articles tagged 'gabriella engels'
Grace Mugabe left in suspense 11 May 2018 HARARE - Former first lady Grace Mugabe must be on tenterhooks after lawyers representing South African model Gabriella Engels presented their arguments in the Pretoria High Court yesterday seeking the lifting of a diplomatic immunity granted to the wife of ex-president, Robert Mugabe. The fir...
Grace left in suspense 11 May 2018 HARARE - Former first lady Grace Mugabe must be on tenterhooks after lawyers representing South African model Gabriella Engels presented their arguments in the Pretoria High Court yesterday seeking the lifting of a diplomatic immunity granted to the wife of ex-president, Robert Mugabe. [Adz]
SA court decides Grace's fate 10 May 2018 HARARE - The Pretoria High Court will today give itself a chance to decide an issue that could lead to the revocation of diplomatic immunity granted to Zimbabwe's former first lady, Grace Mugabe, paving the way for her to face prosecution for the alleged assault of a 20-year-old model. The cou...
Grace's SA assault case revived 20 April 2018 JOHANNESBURG - South African civil rights organisation AfriForum said yesterday it was preparing to challenge the diplomatic immunity that was granted to former Zimbabwean first lady Grace Mugabe. The organisation announced this when it gave updates on matters relating to its private prosecuti...
Former first lady faces prosecution in SA 30 November 2017 HARARE - Grace Mugabe is now liable for prosecution in South Africa over the assault of model Gabriella Engels in August, legal experts have said. They told the Daily News yesterday that the mere fact that Grace is no longer the country's first lady creates the risk of having the immunity gran...
Zim, SA flights resume 21 August 2017 HARARE - Zimbabwean and South African airlines resumed operations yesterday after a diplomatic standoff between the neighbouring countries grounded flights for almost two days from Friday evening. South African aviation authorities banned all Air Zimbabwe (AirZim) flights in and out of that co...